Miyaad kugula talin kartaa aalad Amazon Listing si aad u maamusho kaydintaydii?
Bixinta alaab ku filan macaamiishaada suurtogalka ah ayaa aad uga muhiimsan ganacsiga maareynta maraakiibta oo aad ku fekeri karto. Waa maxay cajiibka ah - xaqiiqda, waxaad ka fiicnaan laheyd inaadan ku faani karin helitaanka sawiradaada badeecadaada oo la marsiiyey "iibinta" tag. Waxaan ula jeedaa in aanad marnaba ka dhigi doonin macaamiishaada inay sugaan dib-u-celintaada - Qof kasta oo macaamil ah waa in markasta la siiyaa si dhakhso ah iyadoo loo marayo si sax ah uula maareynaya liiskaaga. Halkan waxaa ah marka ay tahay waqtigii aad adigu dooran lahayd Amazon liiska ku habboon - iyo ka faa'iideysiga maareynta maareynta ansixinta si sax ah si aad dukaankaaga maraakiibta markale uga faa'iidaysto. Qalab kasta oo Amazon ah liiska hoos lagu dhigay waxaa si gaar ah loogu talagalay suuq-geynta suuqa adduunka ee ugu weyn - waxaana si shakhsiyan ah u tijaabiyey dhammaantood, kaliya oo ah dhammaystirnaanta. Markaa, sii akhri akhri oo waxaad dareemeysaa bilaash inaad ku qaadato xalka maareynta maaraynta ugu haboon ee ku habboon baahidaada iyo himilooyinkaaga.
Ugu horeyn iyo laga yaabo inay noqoto qalabka ugu sahlan ee Amazon liiska, Sellics waxay la socotaa xariijin muuqaal wanaagsan leh waana mid aad u fudud in la isticmaalo, xataa loogu talagalay iibiyayaashii hore. Waxaa ka mid ah dhinacyada kale ee xooggan ee software-ka, waxaa jira kormeer dhab ah oo faa'iido leh oo la heli karo Dakhliga Profit, fududeynta fudud ee ololaha iyo kharashka iibinta yareynta iyadoo loo marayo Maamulaha PPC. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Sellics si aad ula socotid oo aad u hagaajisid liistada alaabadaada iyadoo la adeegsanayo cilmi-baaris dhamaystiran oo la heli karo oo ah darajooyinka muhiimka ah, falanqaynta tartanka, iyo dib-u-eegga wax soo saarka.
Alaabta soo socota ee faa'iido leh Amazon liiska waxaan jeclaan lahaa in ay u ordo iyada oo loo marayo waa Stitch Labs. Mashruucan hal-joojin ah wuxuu badiyaa ku shaqeeyaa hawlo badan, oo kordhiya faa'iidada iyadoo la adeegsanaayo automatization, dejinta iyo dhexdhexaadinta. Si fudud u dheji, barnaamijkan wuxuu ku siin karaa iibiyaha Amazon oo leh faahfaahin faahfaahsan, oo qoto dheer oo loo baahan yahay si loo kobciyo korodhka iyo faa'iidada. Waxay si fudud u oggolaataa iibiyeyaasha inay sameeyaan go'aammo wanaagsan oo kor u qaadaya kalsoonida macaamiisha isku mar. Ka mid ah faa'iidooyinka kale ee muhiimka ah ee leh Amazon liiskan liiska, Waxaan helay raadin tartan qiimo leh si loo helo khadka tooska ah ee online, xakameyn xooggan khatarta hawlgalka, saadaalinta saxda ah, iyo qorshaynta caalamiga ah.
Qalabkan qalabaysan ee xeeladaysan ayaa ah xal aad u fiican si loo ilaaliyo marxaladda joogtada ah ee la filayo, inaad abuurto liis adag oo liis ah, iyo sidoo kale waxay taageersan yihiin talooyin wax ku ool ah oo qiime leh iyo wakhti go'an oo tilmaamaya soo jeedin macquul ah iyo ficilada lagu qaadayo dayactirkaaga sahayda (tusaale ahaan, goorta dib loo soo celiyo alaabada iyo inta loo baahan yahay).
Ecomdash waa qalabka ugu dambeeya ee Amazon liiska waxaan jeclaan lahaa inaan ku tuso maanta. Iyo haddii aad ku iibinayso dhowr channels, software-ka maamulka maareynta maareynta automated waxay noqon doontaa xulashadaada dilaaga halkaa. Ecomdash wuxuu u shaqeeyaa si fudud - waxaa loo isticmaali karaa in lagu midoobo saamiyadaada iyo liiska. Waxaan ula jeedaa inaad si sahlan u jajabn karto dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee dhammaan qalabka iibsadaha - sida shuruudaha maraakiibta, amarrada iibka, iyo wixii la mid ah - si ay u helaan dhamaantood si habsami leh oo loo heli karo. Iyada oo la socda xogta la heli karo waqtiga dhabta ah, waxaad ku siin kartaa kor u qaadida qiyaasta ganacsigaaga, oo bilaw iibinta xitaa waxyaabo kale oo badan iyada oo loo maro tiro dhowr ah - si fudud oo sahlan Source .